Clearbit- သင့် B2B ဝဘ်ဆိုဒ်ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရန် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထောက်လှမ်းရေးကို အသုံးပြုခြင်း။ Martech Zone
ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် ၎င်းတို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ လမ်းကြောင်းအသွားအလာကို မောင်းနှင်ရန်အတွက် ၎င်းတို့၏စွမ်းအင်များစွာကို အာရုံစိုက်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့် အခြားကြားခံများပေါ်တွင် ကြော်ငြာများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကာ အတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသော ဦးဆောင်မှုများကို တွန်းအားပေးရန် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် အကြောင်းအရာများကို ဖန်တီးပေးကာ ၎င်းတို့၏ ဝဘ်ဆိုဒ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးသောကြောင့် ၎င်းသည် Google ရှာဖွေမှုတွင် အဆင့်ပိုများစေသည်။ သို့တိုင်၊ အများစုသည် ၎င်းတို့၏ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားအားထုတ်မှုများ ရှိနေသော်လည်း ၎င်းတို့၏ ဝဘ်ဆိုဒ်ကို အလွန်အကျွံ အသုံးပြုနေကြသည်ကို မသိကြပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဆိုက်အသွားအလာ တိုးလာခြင်းသည် အလုံးစုံ စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှု ဗျူဟာတစ်ခု၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော် ဝဘ်ဆိုဒ်လည်ပတ်သူများသည် ၎င်းတို့ကိုယ်မိမိ မလူသိများပါက (ဥပမာ၊ ဖောင်ဖြည့်ခြင်းဖြင့်) များစွာ အဓိပ္ပါယ်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့ ကိုယ့်မှာ ရှိရဲ့လား။ 10 စက္ကန့် သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်မှ မထွက်ခွာမီ ဧည့်သည်တစ်ဦး၏ အာရုံကို ဖမ်းစားရန်။ အကယ်၍ သင်သည် ဆိုက်လည်ပတ်သူ အများအပြားကို ရရှိနေသော်လည်း ၎င်းတို့ထဲမှ အနည်းငယ်ကို ဦးဆောင်သူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲမည်ကို စိတ်ပျက်မိပါက ထိုစက္ကန့်အနည်းငယ်ကို အမှန်တကယ် ရေတွက်ရန် အချိန်တန်ပြီ - ၎င်းသည် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းမှာ အဓိကဖြစ်သည်။
လူတိုင်းနှင့် စကားပြောရန် ကြိုးစားခြင်းသည် သင်၏ အမှန်တကယ် ပစ်မှတ်ထားသော ပရိသတ်များထံ သင့်မက်ဆေ့ချ်၏ စွမ်းအားကို ပျော့ပျောင်းသွားစေခြင်း ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ထားသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံကို ဖန်တီးပေးကာ ပိုမိုမြန်ဆန်သောကူးပြောင်းမှုများနှင့် အလားအလာကောင်းသောဆက်ဆံရေးများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Personalization ကို တိုးစေတယ်။ ဆက်စပ်မှု မင်းရဲ့ မက်ဆေ့ချ် နဲ့ ဆက်စပ်မှု က တွန်းအား ဖြစ်စေတယ်။ စေ့စပ်ထားခြင်း.
အခု မင်းကိုယ့်ကိုကိုယ် တွေးနေနိုင်တယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ 100၊ 1000 သို့မဟုတ် ပစ်မှတ်ကုမ္ပဏီ 10,000 ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ စိတ်ကြိုက်စာတိုပေးပို့နိုင်မည်နည်း။ ထင်ထားတာထက် ပိုလွယ်တယ်။
Web Traffic ပိုများလာစေရန်အတွက် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ
စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုတစ်ခုခုကို အကောင်အထည်မဖော်မီတွင်၊ သင်သည်မည်သူကိုပစ်မှတ်ထားရမည်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်အချို့ချရန်လိုအပ်သည်။ တစ်ဦးချင်းစီ သို့မဟုတ် ပရိသတ်မျိုးကွဲတိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရန် နည်းလမ်းမရှိပါ။ သင်၏စံပြဖောက်သည်ပရိုဖိုင်နှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပုဂ္ဂိုလ်များမှ အသိပေးထားသည့် သင်၏ထိပ်တန်းအပိုင်းတစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုကိုသာ အာရုံစိုက်ပြီး ၎င်းတို့ကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကွဲပြားစေသောအရာကို အာရုံစိုက်ပါ။
ဤပစ်မှတ်အပိုင်းများကို ခွဲခြားရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေသော သာမာန် firmographic attribute များမှာ-
စက်မှုလုပ်ငန်း (ဥပမာ၊ လက်လီ၊ မီဒီယာ၊ နည်းပညာ)၊
ကုမ္ပဏီအရွယ်အစား (ဥပမာ၊ လုပ်ငန်း၊ SMB၊ စတင်မှု)
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား (ဥပမာ- e-commerce၊ B2B၊ အကျိုးတူအရင်းအနှီး)
တည်နေရာ (ဥပမာ၊ အရှေ့မြောက်အမေရိက၊ EMEA၊ စင်္ကာပူ)
လူဦးရေစာရင်းဒေတာ (အလုပ်ခေါင်းစဉ်ကဲ့သို့) နှင့် အပြုအမူဆိုင်ရာဒေတာ (စာမျက်နှာကြည့်ရှုမှုများ၊ အကြောင်းအရာဒေါင်းလုဒ်များ၊ အသုံးပြုသူခရီးများနှင့် အမှတ်တံဆိပ်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုများကဲ့သို့) တို့ကို သင့်လျော်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသော သုံးစွဲသူများကို နောက်ထပ်အပိုင်းပိုင်းအဖြစ် အသုံးချနိုင်သည်။ သင်၏ဧည့်သည်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာနားလည်ခြင်းက သင့်အား ၎င်းတို့၏ခရီးစဉ်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်ကာ သင်၏နှုတ်ဆက်ခြင်း၊ လမ်းပြခြင်းနှင့် ကမ်းလှမ်းမှုများကို သင့်လျော်စွာ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်။
သေချာပါသည်၊ အပိုင်းတစ်ခုစီအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာများကို သင်ဖန်တီးပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော စာတိုပေးပို့ခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ရန်ခေါ်ဆိုမှုများ၊ သူရဲကောင်းရုပ်ပုံများ၊ လူမှုရေးအထောက်အထားများ၊ ချတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို ပြသခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် သင့်ဆိုက်တစ်ခုလုံးတွင် သက်ဆိုင်ရာ တန်ဖိုးအဆိုပြုချက်များကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
reverse-IP ထောက်လှမ်းရေးကိရိယာနှင့်တူသည်။ Clearbit's Reveal Intelligence Platform၊ သင်သည် ဤလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအတွက် ဦးခေါင်းစတင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Clearbit ဖြေရှင်းချက် ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
Clearbit သည် B2B စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ထောက်လှမ်းရေးပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် ဝင်ငွေအဖွဲ့များသည် ၎င်းတို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးတွင် ကြွယ်ဝပြီး အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဒေတာကို အသုံးချနိုင်စေသည့် BXNUMXB စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Clearbit ၏ ပင်မပလက်ဖောင်းစွမ်းရည်များထဲမှတစ်ခုမှာ Reveal သည် ဝဘ်ဆိုက်လည်ပတ်သူအလုပ်လုပ်သည့်နေရာကို အလိုအလျောက်ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် Clearbit ၏အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီထောက်လှမ်းရေးပလပ်ဖောင်းမှ ထိုကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သက်သော အဓိကအရည်အချင်း 100 ကျော်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် Reverse IP ရှာဖွေသည့်စနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကုမ္ပဏီအမည်၊ အရွယ်အစား၊ တည်နေရာ၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ အသုံးပြုထားသော နည်းပညာများနှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ခြင်းကို အားဖြည့်ရန်အတွက် ကြွယ်ဝသောဒေတာကို ချက်ချင်းပေးစွမ်းပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ အီးမေးလ်လိပ်စာကို မပေးမီတွင်ပင်၊ သင်မည်သူနှင့် ဆက်ဆံနေသနည်း— ၎င်းတို့သည် ပစ်မှတ်အကောင့်တစ်ခု သို့မဟုတ် သီးခြားကဏ္ဍတစ်ခုသို့ ရောက်နေသည်ဖြစ်စေ — နှင့် ၎င်းတို့ရှာဖွေနေသည့် စာမျက်နှာများကို သင်သိနိုင်သည်။ Slack နှင့် အီးမေးလ်ပေါင်းစပ်မှုများဖြင့် Clearbit သည် သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ ပစ်မှတ်အလားအလာများနှင့် အဓိကအကောင့်များရောက်ရှိလာသည်နှင့်တပြိုင်နက် Clearbit သည် အရောင်းနှင့်အောင်မြင်ရေးအဖွဲ့များကိုပင် အသိပေးနိုင်ပါသည်။
Clearbit ဖြင့်၊ သင်လုပ်နိုင်သည်-
ပိုမိုလာရောက်လည်ပတ်သူများကို ပိုက်လိုင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပါ- အံဝင်ခွင်ကျ မြင့်မားသော ဝဘ်လည်ပတ်သူများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော အတွေ့အကြုံများကို ဖန်တီးပါ၊ ဖောင်များကို အတိုချုံ့ကာ သင်၏တန်ဖိုးရှိသော အသွားအလာကို အကောင်းဆုံးရယူလိုက်ပါ။
သင်၏ အမည်မသိ ဝဘ်ဆိုက် လည်ပတ်သူများကို ဖော်ပြပါ- သင့်အသွားအလာကို နားလည်ပြီး အလားအလာများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် အကောင့်၊ အဆက်အသွယ်နှင့် IP ထောက်လှမ်းရေးဒေတာတို့ကို ပေါင်းစပ်ပါ။
ပွတ်တိုက်မှုများကို ဖယ်ရှားပြီး ခဲမှ အရှိန်မြှင့်ပါ။. ပုံစံများအတိုချုံ့ကာ အတွေ့အကြုံများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီး အံဝင်ခွင်ကျမြင့်သောအကောင့်များ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြသသောအခါတွင် သင့်အရောင်းအဖွဲ့ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သတိပေးပါ။
အရောင်းအဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုသာပေးဆောင်သည့်အခြားဖြေရှင်းနည်းများနှင့်မတူဘဲ Clearbit သည် ကုမ္ပဏီပေါင်း 100 သန်းကျော်အတွက် 44+ attribute များကိုပေးပါသည်။ ပိတ်ထားသော၊ “အားလုံးပေါင်း-တစ်ပုံတည်း” ဖြေရှင်းချက်များနှင့်မတူဘဲ Clearbit ၏ API-ပထမပလပ်ဖောင်းသည် သင့်လက်ရှိစနစ်များနှင့် Clearbit ဒေတာကို ပေါင်းစပ်ရန် လွယ်ကူစေပြီး သင်၏ MarTech stack တစ်ခုလုံးတွင် အလုပ်လုပ်စေရန် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
Clearbit သည် ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုသို့ လာရောက်လည်ပတ်သည့်ကုမ္ပဏီများနှင့် ၎င်းတို့သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည့် စာမျက်နှာများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးသည့် ၎င်း၏ Weekly Visitor Report ဖြင့် အဆိုပါစွမ်းရည်များ၏ အခမဲ့ဗားရှင်းကိုလည်း ပေးဆောင်ပါသည်။ အပတ်စဉ် ပုံစံကျကျ၊ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသော အစီရင်ခံစာကို သောကြာနေ့တိုင်း အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ပြီး သင့်အား လာရောက်လည်ပတ်သူများ၊ ဝယ်ယူမှုချန်နယ်နှင့် လုပ်ငန်း၊ ဝန်ထမ်းအရွယ်အစား၊ ဝင်ငွေ၊ နည်းပညာများနှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီ၏ဂုဏ်ရည်များကို အရေအတွက်အားဖြင့် ပိုင်းခြားနိုင်စေပါသည်။ သင်လုပ်ရန်မှာ စာမျက်နှာတိုင်းတွင် pixel တစ်ခု (GIF ဖိုင်) ကို ထိုးသွင်းသည့် ပေါ့ပါးသော script ကို သင့်ဝဘ်ဆိုက်တွင် ထည့်သွင်းပါ။ ထို့နောက်၊ ဧည့်သည်တစ်ဦးသည် စာမျက်နှာတစ်ခုကို ဖွင့်သည့်အခါတိုင်း၊ Clearbit သည် IP လိပ်စာကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး ၎င်းကို ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် ကိုက်ညီစေရန်အတွက် သင့်တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာဝတ္ထုကို သင်ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီး သင့်ဝဘ်ဆိုက်အသွားအလာအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Clearbit ၏ အပတ်စဉ် ဧည့်သည်အစီရင်ခံစာကို အခမဲ့ စမ်းသုံးကြည့်ပါ။
Clearbit ဖြင့် B2B ဝဘ်ဆိုဒ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးမြှင့်ခြင်း။
ဝဘ်ဆိုက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းကို စတင်စမ်းသပ်ရန် အကောင်းဆုံးနေရာသည် သင်၏ ခေါင်းစီးများ၊ ဖောက်သည် နမူနာများနှင့် CTAs များဖြင့် ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, DocSendစာရွက်စာတမ်းမျှဝေသည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် ၎င်းတို့၏ပစ်မှတ်ပရိသတ်များဖြစ်သည့် စတင်တည်ထောင်သူများ၊ အကျိုးတူအရင်းရှင်များနှင့် လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများအတွက် ယင်းကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပရိသတ်တစ်ဦးစီသည် DocSend ၏ဝဘ်ဆိုက်သို့ရောက်ရှိလာသောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်သူရဲကောင်းသတင်းစကား၊ တန်ဖိုးဖော်ပြချက်နှင့် သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အတူ လူမှုရေးဆိုင်ရာသက်သေကဏ္ဍကို ရရှိခဲ့သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့် လူမှုကာကွယ်မှုအပိုင်းသည် ခဲဖမ်းခြင်းတစ်ခုတည်းတွင် 260% တိုးလာသည်။
သင့်ဝဘ်စာမျက်နှာများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီး လာရောက်လည်ပတ်သူများကို စွဲမြဲနေစေရန် ဆွဲဆောင်ပြီးသည်နှင့်၊ ယာဉ်အသွားအလာကို ဦးဆောင်သူများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် ကိစ္စရှိသေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အကွက်များလွန်းသောပုံစံများသည် ဝယ်သူများ၏ငြီးတွားခြင်းနှင့် အရှိန်မြှင့်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသည် - သို့မဟုတ် လုံးဝအာမခံချက်ဖြစ်စေသည်။
ဒါက ပြဿနာတစ်ခုပါ။ သငေ်္ဘာwebinar နှင့် video meeting platform တစ်ခုဖြစ်သည့် Clearbit ကို ကူညီဖြေရှင်းပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ အခမဲ့ အစမ်းသုံး အကောင့်ဖွင့်ခြင်း ပုံစံသို့ ရောက်သောအခါ၊ 60% ကျဆင်းမှုနှုန်းကို တွေ့နေရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ “အခမဲ့စမ်းသုံးကြည့်ပါ” ခလုတ်ကို နှိပ်ခဲ့သော ဆိုက်လာရောက်သူ ထက်ဝက်ထက်နည်းသော အကောင့်ဖွင့်ခြင်းကို အမှန်တကယ် အပြီးသတ်ပြီး Livestorm အရောင်းအဖွဲ့၏ ရေဒါတွင် တင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဤစာရင်းသွင်းမှုပုံစံသည် အလားအလာရှိသော ဦးဆောင်သူများကို ဖော်ထုတ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ထားသော်လည်း ဖြည့်စွက်ရန် နယ်ပယ်များစွာရှိပါသည် (ပထမအမည်၊ နောက်ဆုံးအမည်၊ အီးမေးလ်၊ အလုပ်ခေါင်းစဉ်၊ ကုမ္ပဏီအမည်၊ လုပ်ငန်းနှင့် ကုမ္ပဏီအရွယ်အစား) ကြောင့် လူများကို နှေးကွေးစေပါသည်။
အဖွဲ့သည် တန်ဖိုးရှိသော နောက်ခံဒေတာကို မဆုံးရှုံးစေဘဲ စာရင်းသွင်းပုံစံကို အတိုချုံးချင်သည်။ ဦးဆောင်သူ၏လုပ်ငန်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေရန် အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုအသုံးပြုသည့် Clearbit ဖြင့် Livestorm သည် ကွက်လပ်သုံးခု (အလုပ်ခေါင်းစဉ်၊ လုပ်ငန်းနှင့် ကုမ္ပဏီအရွယ်အစား) အားလုံးကို ဖောင်ပုံစံမှ ဖြတ်တောက်ပြီး ကျန်နယ်ပယ်သုံးခု (အမည်၊ နောက်ဆုံးအမည်နှင့် ကုမ္ပဏီကို အလိုအလျောက်ဖြည့်ပေးသည်။ အမည်) တွင် ဦးဆောင်သူသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းအီးမေးလ်လိပ်စာတွင် ရိုက်ထည့်လိုက်သည်နှင့်။ ၎င်းသည် ဖောင်တွင် လူကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းရန် ကွက်လပ်တစ်ခုသာ ကျန်တော့သည်၊ ပြီးမြောက်မှုနှုန်းကို 40% မှ 50% အထိ တိုးတက်စေပြီး တစ်လလျှင် 150 မှ 200 အထိ အပိုဆောင်းပို့ဆောင်မှုများ ပေါင်းထည့်ပါသည်။
ဖောင်များအပြင်၊ ဝဘ်ဆိုဒ်အသွားအလာကို ဦးဆောင်သူများအဖြစ်သို့ ပြောင်းရန် အခြားနည်းလမ်းမှာ ပိုမိုလွယ်ကူသော chatbox အတွေ့အကြုံများမှတဆင့်ဖြစ်သည်။ On-site chat သည် သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်လာရောက်လည်ပတ်သူများနှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ရန်နှင့် ၎င်းတို့လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ဖော်ရွေသောနည်းလမ်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ပြဿနာမှာ ချက်တင်စကားပြောဆိုမှုစတင်သူအားလုံးတွင် သင်၏တန်ဖိုးအမြင့်မားဆုံးအလားအလာမှာ မည်သူဖြစ်ကြောင်း သင်မကြာခဏ မပြောနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏စံပြဖောက်သည်ပရိုဖိုင် (ICP) နှင့်မကိုက်ညီသော တူညီသောစွမ်းအင်ပမာဏကို အပ်နှံရန် အချိန်နှင့် အရင်းအမြစ်များ ဖြုန်းတီးနေပါသည်။
သို့သော် သင်၏ VIP များပေါ်တွင် သင်၏ တိုက်ရိုက်ချတ်အရင်းအမြစ်များကို အာရုံစိုက်ရန် နည်းလမ်းရှိလျှင်ကော။ ထို့နောက် သင်သည် ၎င်းတို့အား အရည်အချင်းပြည့်မီပုံမပေါ်သေးသော ဧည့်သည်များကို ချတ်ဝန်ဆောင်မှုကို မဖော်ပြဘဲ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော အတွေ့အကြုံကို ပေးနိုင်ပါသည်။
Clearbit ၏ဒေတာကိုအခြေခံသည့်ချတ်များကိုစတင်သတ်မှတ်ရန် Drift၊ Intercom နှင့် Qualified ကဲ့သို့သော ချတ်တူးလ်များနှင့် Clearbit ကိုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။ သင်၏ ICP နှင့်ဆင်တူသော ပိုမိုသက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာများဖြစ်သည့် ဧည့်သည်များကို ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်း၊ ebook CTA သို့မဟုတ် သရုပ်ပြတောင်းဆိုမှုကဲ့သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ပိုကောင်းတာက၊ သင်သည် ဧည့်သည်ကို အမှန်တကယ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့် စကားပြောနေသည် (bot အစား) ပိုမို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်သော ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အချက်ပြပေးရန်အတွက် chat တွင် အမှန်တကယ် ကိုယ်စားလှယ်ကို ပြသနိုင်သည်။ သင့်ချက်တင်တူးလ်၏ပုံစံများနှင့် Clearbit ၏ဒေတာကို အသုံးပြု၍ လာရောက်လည်ပတ်သည့်ကုမ္ပဏီ၏အမည်နှင့် အခြားအချက်အလက်များကို အသုံးပြုရန် သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ညှိပေးနိုင်သည်။
၎င်းတို့၏ဆိုက်ကိုလာရောက်လည်ပတ်သူများအား အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ရန်၊ ဒေတာဘေ့စ်ပလပ်ဖောင်း MongoDB မတူညီသော ချတ်လမ်းကြောင်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်- ရမှတ်နိမ့်သောအလားအလာများ၊ ရမှတ်မြင့်မားသောအလားအလာများ၊ ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှု၊ ၎င်းတို့၏ အခမဲ့ထုတ်ကုန်၊ အသိုင်းအဝိုင်း သို့မဟုတ် MongoDB တက္ကသိုလ်အကြောင်း လေ့လာရန် စိတ်ဝင်စားသူများ။
အပိုင်းတစ်ခုစီအတွက် chat အတွေ့အကြုံကို ကွဲပြားစေခြင်းဖြင့် MongoDB သည် အရောင်းအဖွဲ့နှင့် နောက်ထပ်3ဆ စကားပြောဆိုမှုများကို တွေ့မြင်ရပြီး ဘွတ်ကင်လုပ်မည့်အချိန်ကို ရက်အနည်းငယ်မှ စက္ကန့်အထိ ရိတ်ထားသည်။ MongoDB ဝဘ်ဆိုက်ရှိ အဆက်အသွယ်ပုံစံသည် အရောင်းစကားပြောဆိုမှုများအတွက် သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်ခဲ့သော်လည်း၊ chat သည် လက်ဆွဲသူများအတွက် အဓိကအရင်းအမြစ်အဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။
သို့သော် ဆိုက်လာရောက်သူများသည် ဖောင်တစ်ခုဖြည့်ပြီး သို့မဟုတ် ချတ်မှတစ်ဆင့် သင့်ထံ ဆက်သွယ်ပြီးနောက် မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ အသေးငယ်ဆုံးသော တုံ့ပြန်မှုနှောင့်နှေးခြင်းသည်ပင် အစည်းအဝေးများနှင့် သဘောတူညီချက်အသစ်များကို ကုန်ကျနိုင်ပါသည်။
Clearbit အသုံးမပြုမီ၊ ရေဒါဆော့ဖ်ဝဲရေးသူနှင့် လိုက်ဖက်သော၊ လျှို့ဝှက်ရေး-ပထမ တည်နေရာဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ကုမ္ပဏီသည် ဖောင်တင်ပြီး တစ်နာရီအတွင်း ဦးဆောင်သူထံ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည် – ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ ထို့နောက်၊ အတိုးနှုန်းနှင့် ဝယ်ယူလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက် အမြင့်ဆုံးရောက်သောအခါ၊ ပစ်မှတ်အကောင့်တစ်ခု ၎င်းတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင် ရှိနေသည့်အချိန်ကို ကိုယ်စားလှယ်များအား အကြောင်းကြားရန် Clearbit ကို အသုံးပြုပြီး Radar သည် ၎င်းတို့၏ဆိုက်ကိုဝင်ပြီး မိနစ်ပိုင်းအတွင်း အကောင့်ဆီသို့ အရှိန်လျှော့သွားခဲ့သည်။
ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်၊ စာမျက်နှာကြည့်ရှုခြင်း၊ Salesforce နှင့် firmographic data တို့အပေါ်အခြေခံ၍ မည်သည့်ဧည့်သည်များက အကြောင်းကြားချက်များကို စတင်စေမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက်၊ Slack တွင် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သတိပေးချက်များ (သို့မဟုတ် အီးမေးအချေအတင်များကဲ့သို့ အခြားဖော်မတ်များ) သည် ကုမ္ပဏီ၊ ၎င်းတို့ဖွင့်ထားသည့် စာမျက်နှာနှင့် ၎င်းတို့၏ မကြာသေးမီက စာမျက်နှာကြည့်ရှုမှုမှတ်တမ်းအကြောင်း အချက်အလက်များကို ပြသသည်။
ကုမ္ပဏီရှိလူတိုင်း ဖြစ်ပျက်နေသည်များကို မြင်နိုင်၊ တုံ့ပြန်ရန်နှင့် ပါဝင်ကူညီနိုင်ရန် ရေဒါမှ အသိပေးချက်များကို အများသူငှာ ချန်နယ်တစ်ခုတွင်ပင် - သတ်မှတ်ပေးထားသည်။ အထိမ်းအမှတ် အီမိုဂျီများကြားတွင်၊ သတိပေးချက်များသည် ဖောက်သည်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် တာဝန်ပေးထားသည့် ကိုယ်စားလှယ်သာမက လူတိုင်းအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်အသစ်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။ Clearbit ဖြင့် ၎င်းတို့၏ဝဘ်ဆိုက်တွင် အကောင့်တစ်ခုကို မြင်နိုင်ခြင်း၊ မှန်ကန်သောအချိန်၌ ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး အစည်းအဝေးကို ကြိုတင်စာရင်းသွင်းနိုင်ခြင်းဖြင့် ရေဒါသည် ပိုက်လိုင်းအတွက် ဒေါ်လာ ၁ သန်း ထပ်မံထုတ်ပေးခဲ့သည်။
Tags: b2bb2b သည် ပြောင်းလဲနေသော အကြောင်းအရာb2b ခဲအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း။b2b စျေးကွက်ရှာဖွေရေးထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းအရွယ်အစားချက်တင်chat အတွေ့အကြုံစကားပြောခန်း စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်ခြင်း။ကျောက်တုံးကုမ္ပဏီစက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတည်နေရာကုမ္ပဏီအမည်နောက်ထပ်ပြောင်းပါ။လူ ဦး ရေဆိုင်ရာဒေတာdocsendပြောင်းလဲနေသောအကြောင်းအရာတက်ကြွသောသူရဲကောင်းebookအီးမေးလ်ပေါင်းစည်းမှုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါပုံစံဖမ်းip ထောက်လှမ်းရေးအပြောင်းအလဲများကို ဦး ဆောင်သည်။သငေ်္ဘာတည်နေရာMongoDBနေပြည်တော်pixel gifစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းအချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သတိပေးချက်များအချိန်နှင့်တပြေးညီစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းအသိဥာဏ်ကိုဖော်ထုတ်ပါ။ပြောင်းပြန် ip ရှာဖွေမှုပြောင်းပြန် ip-ထောက်လှမ်းရေးreverse-ipအရောင်းသတိပေးချက်များအရောင်းပိုက်လိုင်းရောင်းသူsalesforce အခွင့်အလမ်းများအရောင်းဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းပုံစံများကို အတိုချုံးပါ။စာရင်းသွင်းပုံစံအားလျော့သတိပေးချက်slack ပေါင်းစပ်မှုနည်းပညာတွေသုံးတယ်။သေနတ်မောင်းခလုတ်သတိပေးချက် အစပျိုးသည်။လုပ်ငန်းအမျိုးအစားဝဘ်ဆိုဒ် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း။အပတ်စဉ်ဧည့်သည်အစီရင်ခံစာ